Ikhaya leHolide yanamhlanje kwi-Easterlittens kunye noLoba olukufuphi
Indlu entle kwilali encinci yaseFrisian yaseEasterlittens (Oosterlittens). Indlu yekona ifanelekile ngokukhethekileyo kubantu abadala be-2, kodwa abantu aba-2 abongezelelweyo banokulala kwi-sofa bed. Udonga lwegumbi lokuhlala luzaliswe ngee-LPs onokuthi uzidlale kumdlali werekhodi. Ngaphambili kwendlu kukho i-terrace.
Kule lali kukho inkampu enethafa phezu kwamanzi. Apha ungaqesha amaphenyane xa uhamba ngephenyane. I-Franeker kunye ne-Bolswardervaart zibaleka kwilali. Le mijelo ikulungele ukuhamba ngephenyane, ukuqubha kunye nokuloba. Ukusuka e-Easterlittens kukho iindlela ezininzi zokukhwela ibhayisekile ngokujonga umhlaba weGreidhoeke. Kwicawe yase-Wiuwert kukho ii-mummies ezi-4 kwindawo yokungcwaba onokuthi uyindwendwele. Okanye uqhubele eHarlingen ngemizuzu engama-20 kwaye uthathe isikhephe ukuya eTerschelling okanye eVlieland. Izixeko ezi-6 kwezili-11 ze-Elfstedentocht zikumgama wokuhamba ngebhayisikile.
Kukho iibhayisekile ezi-2 ezikulindileyo. Ungayibhukisha i-B&B ubuncinci beentsuku ezi-2, kodwa ikulungele ukuhlala ixesha elide. Iibhedi zenziwa xa ufika.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ipaseji(umatshini wokuhlamba), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlamba, indlu yangasese))
Kumgangatho woku-1: (Ikhitshi(iketile yombane, i-cooker(izitovu ezi-4), umatshini wekofu, i-microwave edibeneyo, i-dishwasher, ifriji-isikhenkcisi), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(ibhedi yesofa kabini, iTV, unomathotholo))
ukufudumeza, i-terrace, ifanitshala yegadi, izixhobo zokudlala, iibhayisekile ezikhoyo
Izimvo eziyi-3 937